FIKAMBANAN’NY MPAKA SARY AN-GAZETY CRIMAD : Niaraka nifety
Toy ny fanao isan-taona dia nanatanteraka fifampiarabana nahatratra ny taona vaovao ny mpaka sary an-gazety mivondrona ao amin’ny fikambanana crimad ( collectif des reporters d’ images de Madagascar). 10 février 2019
Tetsy amin’ny corporate advantures Ambohimanambola no nanaovana izany ka vory lanona ny rehetra niaraka tamin’ny orianasa vidzar. Maro ny zavatra hita teny an-toerana satria ankoatra ny maha fifampiarabana dia nisy koa fifanankalozana tsotsotra teo amin’ny rehetra. Nandritra ny fandraisam-pitenenana nataon’ny filohan’ny olafitry ny Mpanao gazety no nampahatsiahivany ny anjara toeran’ny mpakasary eo amin’ny tontolon’ny asa fanaovan-gazety.
Tsy toy ny mpaka sary mariazy ny mpaka sary an-gazety, hoy izy fa manana ny zo maha mpanao gazety feno ary mitaiza ny mpiara-belona toy ireo mpanao gazety an-tsoratra sy radio. Izany hoe mpanao gazety manafeno ny fepetra satria voafonon’ny sary avokoa ny vaovao rehetra rehefa mitombona tsara ny maha sary an-gazety ilay sary nalaina. Taorian’izay dia nitsodrano ireo mpanao gazety rehetra ny tenany fa indrindra ny mpaka sary mba ho tratry ny taona manaraka indray. Fa nitondra fanazavana ihany koa ny filoha mpitantana ny fikambanana ny amin’ny antony nanaovana ny fety ho andro zoma izay fiasana ho an’ny rehetra.
Rehefa natao, hoy izy ny fanatonana ireo mpiara-miasa akaiky, rehefa nojerena ihany koa ny andro mety hahafahan’ny rehetra dia io andro zoma io no tsara sady mety amin’ny rehetra. Tsy afaka nahemotra intsony izany noho ny fahamaroan’ny asa izay tsy azo avela ka nifandamina ny rehetra mba hahatomombana antsakany sy andavany izany fety efa fanao isan-taona izany. “Aoka ho mafy orina toy izao ny fiarahana sy fifankatiavana eo amintsika mpaka sary mba tsy hataon’ny olona fitaovana politika fotsiny ihany amin’ireo sary mitahiry fahatsiarovana ho an’ny tantaram-pirenena”.
Nisy ny fiaraha-misakafo, fialamboly maro toy ny fiakarana amin’ny karazana havoana, tsipy kanetibe niaraha-nanao. Tao koa ny fitsidihina sy fanmpahafantarana ireo karazana fialamboly ao an-toerana. Na somary sarotsarotra aza ny lalana mankany amin’io toerana io dia tsy nahasakana ny rehetra izany fa mba te hiala voly sy hifampizara hafaliana toy ireo olon-drehetra ihany koa ny mpaka sary an-gazety.